गुल्मीको कुन क्याम्पसमा को बिजयी? यस्तो छ गुल्मीको सबै क्याम्पसहरुको स्वबियु निर्वाचन नतिजा – Gulmiews
गुल्मीको कुन क्याम्पसमा को बिजयी? यस्तो छ गुल्मीको सबै क्याम्पसहरुको स्वबियु निर्वाचन नतिजा
२१ फाल्गुन २०७३, शनिबार १६:१३ सन्जु काउछा मगर
गुल्मी, फागुन २१। देशभरका अधिकाशं क्याम्पसहरुको स्ववियूको नतिजा आइरहँदा गुल्मीमा निर्वाचन भएका सबै क्याम्पसको नतिजा आएको छ । जिल्लामा रहेका कुल ११ क्याम्पसमध्ये ७ वटा क्याम्पसमा स्ववियुको निर्वाचन भएको थियो । गुल्मीमा बिभिन्न क्याम्पसमा भएको निर्वाचनमा अखिल क्रान्तिकारीले ३ वटा क्याम्पस, अनेरास्वबियु ३ वटा क्याम्पस र नेपाल बिद्यार्थी संघ १ क्याम्पसमा निर्वाचित भएको छ । बिभिन्न बिद्यार्थी संगठनको अबरोधका कारण सत्यबती बहुमुखी क्याम्पस हसरा, मानका टिकाराम बहुमुखी क्याम्पस तुराङ्ग, रुद्धाबती बहुमुखी क्याम्पस वामीटकसार र आर्दश बहुमुखी क्याम्पस दिगाममा निर्वाचन हुन सकेन ।
धुर्कोट परमानन्द बहुमुखि क्याम्पस, धुर्कोट बस्तुमा शितल थापा विजयी भएकी छन् । उनले कुल ५८ मतमध्ये २७ मत ल्याउदै विजयी भएकी हुन् । उनका प्रतिद्धन्ति नेपाल विद्यार्थी संघका अशोक खनालले २४ मत ल्याएका थिए । त्यस क्याम्पसमा अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको विद्यार्थी संगठनले संयुक्त प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा गएको अखिल क्रान्तिकारीका जिल्ला कोषाध्यक्ष राजन केसीले जानकारी दिए । श्रृङ्गेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, रानिवासमा किशन पाण्डे विजयी भएका छन् । उनले कुल १५८ मतमध्ये ल्याएका थिए । क्याम्पसमा नेविसंघ र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको संयुक्त प्यानल तथा अनेरास्ववियुको प्यानल चुनावी मैदानमा थिए । जनज्योति बहुमुखि क्याम्पस पुर्कोट दहमा अखिल क्रान्तिकारीकै श्रृजना घिमिरे निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यस्तै क्रन्तिकारी विद्यार्थी संगठनले रुरु सस्कँत विद्यापिठमा कोषाध्यक्ष जितेको छ । त्यस विद्यार्थी संगठनका किरण सिंजालीले उक्त पद जितेका हुन् ।
जिल्लामा अखिल क्रान्तिकारीले समानुपातिकतर्फका ३ क्याम्पसमा उपसभापति पनि हात पारेको छ । उसले रेसुङ्गा बहुमुखि क्याम्पस, तम्घास, चन्द्रकोट बहुमुखि क्याम्पस शान्तिपुर र रुरु सँस्कृत विद्यापिठ रिडिमा उपसभापति जितेको जिल्ला अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य घनश्याम खरेलले बताए । रुरु सँस्कृत विद्यापिठ क्याम्पसमा गणेश भट्राई तथा रेसुङ्गा बहुमुखि क्याम्पसमा गणेश पौडेल उपसभापति रहेका छन् ।
उक्त क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको संयुक्त प्यानल नै विजयी भएको छ । जिल्लाका क्याम्पसमध्ये अनेरास्ववियुले ६ क्याम्पसमा सविच जितेको छ । उसले रेसुङ्गा बहुमुखि क्याम्पस, धुर्कोट परमानन्द बहुमुखि क्याम्पस, जनज्योति क्याम्पस, रुरु सँस्कृत विद्यापिठ, रिडी बहुमुखि क्याम्पस र श्रृङ्श्वर बहुमुखि क्याम्पसमा स्ववियु सचिव हात पारेको छ । रेसुङ्गा क्याम्पसमा नविन अर्याल, धुर्कोट परमानन्द क्याम्पसमा शिला भण्डारी, जनज्योति क्याम्पसमा युवराज घिमिरे, रुरु सँस्कृत विद्यापिठमा ज्ञानेन्द्र पाण्डे र श्रृङगेश्वर बहुमुखि क्याम्पसमा किरण ज्ञवाली सचिव पदमा निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तै उसले ३ क्याम्पसमा कोषाध्यक्ष पद जितेको छ । रेसुङ्गा क्याम्पसमा विपना सुर्यवशिं, धुर्कोट परमानन्द क्याम्पसमा मुना कुँवर, रिडी बहुमुखि क्याम्पसमा वितिका थापा र श्रृङगेश्वर क्याम्पसमा श्रृजना थापा कोषाध्यक्ष रहेका अनेरास्ववियुका जिल्ला सह संयोजक शोभाखर गिरीले जानकारी दिए । १ क्याम्पसमा नेविसंघ नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले १ क्याम्पसमा सहमतिका आधारमा रुरु सस्ँकृत विद्यापिठ रिडीमा सभापति जितेको हो । नेविसंघका सुयस रिजाल सभापतिमा चयन भएका छन् । त्यस्तै उक्त संगठनले जिल्लामा १ वटा कोषाध्यक्ष पनि सहमतिकै आधारमा पाएको छ ।
जनज्योति बहुमुखि क्याम्पस पुर्कोटमा संगठनको तर्फबाट शारदा सेन कोषाध्यक्षमा रहेको नेविसंघका जिल्ला कार्यवाहक सभापति झविन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । ४ क्याम्पसमा चुनाव भएन जिल्लाका ४ क्याम्पसमा हालसम्म पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन् । जिल्लाका सत्यवती बहुमुखि क्याम्पस हसंरा, मानका टिकाराम बहुमुखि क्याम्पस मजुवा, रुद्रावति बहुमुखि क्याम्पस वामी र दिगाम आदर्श बहुमुखि क्याम्पस दिगाममा निर्वाचन हुन नसकेको हो ।
वामीको रुद्रावती बहुमुखि क्याम्पस बाहेक अन्य क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको कारणले निर्वाचन हुन नसकेको हो । रुद्रावति बहुमुखि क्याम्पसमा अनेरास्ववियुले लगाएको ताला खोलिएको संगठनका जिल्ला सह संयोजक शोभाखर गिरीले बताए । आलोपालो गर्ने १ क्याम्पस चन्द्रकोट बहुमुखि क्याम्पस, शान्तिपुरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्व विभिन्न विद्यर्थी संगठनले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । उक्त क्याम्पसमा अहिले एमाले निकट अनेरास्ववियुले नेतृत्व गरेको छ ।